Olumoko na-azọ ọkwa onyeisiala ndị njem na Naịjirịa
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Na -eme Nigeria » Olumoko na-azọ ọkwa onyeisiala ndị njem na Naịjirịa
Njem azụmahịa • Editorial • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Akụkọ Na -eme Nigeria • ndị mmadụ • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ dị iche iche
Otunba Ayo Olumoko bụ nnukwu aha na njem na njem nleta. Ọ bụ ọkachamara na azụmaahịa azụmahịa na nkwukọrịta azụmahịa nke ọtụtụ egosila mmasị maka onye isi oche nke Federation of Tourism Associations of Nigeria (FTAN) na nhoputa na-esote nke a na-akwụ ụgwọ maka July 8, 2021.
Olumoko bu onye okacha amara, okacha amara, na omenaala ndi njem nke nwere mmasi n’enweghi mmepe oganihu ndi ntorobia.
O meela ka ebumnuche ya mara ka ọ dị ka afọ 2020 ịzọ ọkwa onye isi oche nke otu a.
N'ime ụfọdụ mmekọrịta ya na ndị otu njem njem dị iche iche na ndị mmadụ n'otu n'otu mpaghara ahụ, ọ gwara ha ugboro ugboro ihe mkpali ya bụ.
Olumoko kwuru, sị: “M na-azọ ọkwa nke Onye isi ala FTAN, ọ bụghị naanị n’ihi na m nọ ya, kama ọ bụ n’ihi na enwere m ndekọ na ahụmịhe nke arụmọrụ na arụmọrụ, ma dịka onye otu gọọmentị na n’ọfịs niile Edeela m na gọọmentị kemgbe ọtụtụ afọ. O doro anya na nke a na-akpata mkpali na nkwenye nke ndị otu m so na-abịakwute m ka m bụrụ onye isi ala ka anyị weghachi Federation.
"M na-agba ọsọ itinye ọnọdụ, itolite ma wusie Federation ike, azụmaahịa azụmaahịa njem, na ndị na-arụ ọrụ ruo ogo na olu kwesịrị m, na-esite na ahụmịhe m na ndekọ ndekọ."
Olumoko gara n'ihu kwuo na ndekọ ya nke ihe ọ rụzuru n'ọkwá ndị gara aga na Federation bụ ihe akaebe nke ikike ya, ihe ọmụma, na mmasi ya maka ụlọ ọrụ na ndị ọchụnta ego ya yana nkwado ngalaba ahụ.